वल्र्डकप कसले जित्छ जस्तो लाग्छ ? किन ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः असार १०, २०७५ - साप्ताहिक
वल्र्डकप कसले जित्छ जस्तो लाग्छ ? किन ?
असार १०, २०७५
जर्मनी, पोर्चुगल, अर्जेन्टिना, ब्राजिलमध्ये एउटाले जित्छ ।
मेरो समर्थन फ्रान्सलाई ।
जति बूढो भए पनि बाघ भनेको बाघ नै हो, त्यसैले यसपालिको वल्र्डकप ब्राजिलले नै जित्छ ।
अर्जेन्टिनाले जित्छ ।
मेरो दृष्टिमा पोर्चुगलले जित्छ ।
मेरा लागि फ्रान्स नै उत्कृष्ट छ ।
रसियामा हुने वल्र्डकप जर्मनीले जित्छ ।
खेलमा कहिल्यै ठोकुवा गर्न सकिँदैन । तैपनि अर्जेन्टिनाले जिते राम्रो ।
मेरा लागि जर्मनीले जिते पनि ब्राजिलले जिते पनि उस्तै । म यी दुवै देशलाई समर्थन गर्छु ।
सधैं जर्मनीले जित्छ भनेर समर्थन गर्थें तर यसपालिको हिरो ब्राजिल हो ।
यसपालि ब्राजिलले जित्छ जस्तो छ ।
मलाई त ब्राजिल सदाबहार लाग्छ ।
ब्राजिलले । किनभने चिसो भनेकै कोकाकोला भने जस्तै फुटबल भनेकै ब्राजिल हो ।
खेलाडीले जित्छ । किनभने गोल उसैले गर्छ ।
यो प्रश्न नै गलत छ । किनभने जसलाई धेरै वल्र्डकप जित्ने बानी परेको छ अहिले पनि उसैले जित्छ ।
पोर्चुगलले जित्छ किनभने उसले नै धेरै गोल हान्छ ।
ट्विटरमा समर्थकको भीड हेर्ने हो भने ब्राजिल वा अर्जेन्टिनामध्ये एकले जित्छ तर रसियामा हुने वल्र्ड फुटबलचाहिँ जर्मनीले जित्छ ।
पोर्चुगलले जित्छ । युरो कप भनेको आधा वल्र्डकप हो, त्यसैले पोर्चुगलले नै जित्छ ।
ब्राजिलले जित्ला नि हौ ।
यसपालि साउदी अरेबियाले जित्छ ।
वल्र्डकप फुटबल जोसुकैले जितोस्, तर हामीलाई आफ्नै नेपाल प्यारो छ ।
भोटिङ गरेर जित्ने भए नेपालले जित्थ्यो । खेल खेलेर त कसले जित्छ भन्न सक्दिनँ ।
जर्मनीले जित्छ यो पालिको विश्वकप । किनभने कुनै स्टार खेलाडी नभए पनि जर्मनीको खेल्ने शैली अरू देशको भन्दा फरक छ । फिनिसिङ राम्रो छ । अहिले सम्मको विश्वकप इतिहास हेर्दा धेरै पटक सेमिफाइनलको यात्रा गरेको छ ।
जोसुकैले जितोस् । हामीलाई केही फरक पर्दैन ।
खेल जसले जिते पनि क्लाइमेक्स राम्रो हुनुपर्‍यो ।
जसले बढी गोल गर्छ उसैले जित्छ ।
अहिले नै थाहा हुने भए किन एक महिना लगाएर खेल खेलिरहनु ?
इतिहास हेर्ने हो भने त ब्राजिलले पाँच पटक विश्वकप जितिसकेको छ ।
वल्र्डकप फुटबल बेल्जियमले जित्छ किनभने अहिले बेल्जियमसँग राम्रा खेलाडी छन् ।
जसले धेरै गोल हान्छ उसैले जित्छ विश्वकप ।
प्रकाशित :असार १०, २०७५
विवाहको चिन्ता किन ?
नेपाली सिनेमा भनेपछि किन नाक खुम्च्याइन्छ ?
नेपाली सिनेमा भनेपछि किन मुख खुम्च्याइन्छ ?
दरबार हत्याकाण्डलाई रहस्यमय मान्नुहुन्छ ? किन ?